P&M का बारे → प्रोफेशनल कम्प्यूटरीकृत कढ़ाई • थोक
व्यावसायिकता संगै अनुभव
P&M सिलाई कोठा १ 1995 2003 in मा रावा माजोइवेकामा स्थापना भएको थियो। २०० From बाट हामी सिलाई, काट्ने, इस्त्री गर्ने र लेबलिंग सेवाहरू प्रदान गर्दछौं। हामी थोक र विज्ञापन कपडा पनि चलाउँछौं।
हाम्रो उच्च योग्य स्टाफले धेरै वर्षको अनुभवको घमण्ड गर्दछ, उनीहरूले उत्कृष्ट मार्किंग प्रविधिको डिजाइन र चयनमा सहयोग गर्न र सल्लाह दिन खुसी छन् - हामी प्रत्येक अर्डर लिनेछौं!
हामीसँग विस्तृत, आधुनिक र सुसज्जित मेशीन पार्क छ, जहाँ त्यहाँ छन्:
तल यातायातका साथ लकस्टिच मेशिनहरू - स्वत: मेशिनहरू
लोकस्टिच मेशिनहरू ठूलो हुकका साथ तल्लो र माथिल्लो यातायातको साथ
दुई सय सपाट
,, And र thread थ्रेड ओभरलक गर्दछ
--सुई र १२-सुई इरेजर ट्रिममा सिलाउने सम्भावनाको साथ
स्टीम जेनरेटरहरूको साथ इस्त्री टेबल
Table. m मिटर कटर, ठाडो चक्कु र ब्यान्ड चक्कुको साथ कोठाको तालिका काट्दै
हामी हाम्रो उत्पादनहरूको उच्च गुणवत्ताको ख्याल राख्छौं
हाम्रो सिलाई कोठाले सुनिश्चित गर्दछ कि हामीले उत्पादन गरेका उत्पादनहरू उत्कृष्ट कार्यात्मक गुणहरू र सबै भन्दा उन्नत रye्ग र फिनिशिंग टेक्नोलोजीहरूको साथ उच्च गुणस्तरका कपडाहरूबाट बनेका छन्। हामी हाम्रो डिस्पोजलमा उपकरणहरूको प्रभावकारी प्रयोगको माध्यमबाट सबैभन्दा बढि माग गर्ने ठेकेदारहरूलाई भेट्न सक्षम छौं। हामीसँग विज्ञापन एजेन्सीहरू र प्रसिद्ध ब्रान्डहरूको लागि सिलाई, काट्ने र डिजाईन गर्ने विस्तृत अनुभव छ।
ग्राहक हाम्रोलागि महत्त्वपूर्ण छ
सन्तुष्ट ग्राहकहरू हाम्रो प्राथमिकता हुन्। तिनीहरूको सकारात्मक सिफारिशहरू निरन्तर विकास र हाम्रो सेवाहरूको उच्च गुणस्तर कायम राख्न प्रोत्साहित गर्दछ।
काम र विज्ञापन लुगा
हामीसँग उत्पादनहरूको एक विस्तृत श्रृंखला छ - ,6000००० भन्दा बढी उत्पादनहरू, वर्कवेयर र विज्ञापन कपडाहरू मान्यता प्राप्त उत्पादकहरूको धेरै आकर्षक मूल्यमा। यिनीहरू हुन्, अन्यहरूका बीचमा, स्वेटशर्टहरू, क्यापहरू, भर्ट्स, शर्ट, ऊन, पोलो शर्ट, टी-शर्ट, वर्क कपडा, विशेषज्ञ लुगा, मेडिकल लुगाहरू, कोल्ड स्टोर्स र फ्रीजरहरूको लागि, र फुटवेयरको विस्तृत श्रृंखला।
कम्प्युटर कढ़ाई / कपडा कढ़ाई
विशेषज्ञ कपडा सहित - विभिन्न प्रकारका कपडाहरूको उत्पादन हाम्रो व्यापक प्रस्तावको एक अंश मात्र हो। सहयोगको भागको रूपमा, हाम्रा ग्राहकहरूले धेरै थप सेवाहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि प्राप्त गर्छन्। हामी पनि एक कढ़ाई कार्यशालाको रूपमा गतिशील रूपमा संचालन गर्छौं, जुन गर्वका लागि हाम्रो सब भन्दा ठूलो कारण हो।
कम्प्युटर कढ़ाई एक उत्कृष्ट गुण, रमणीय र टिकाऊ मार्क लुगा को तरीका हो। विशेष प्राविधिक सुविधाहरूको प्रयोग गरेर हामी कुनै पनि, कुनै पनि आकारको कपडामा कुनै पनि आकारको एकदम सटीक बान्की बनाउन सक्षम छौं। एम्ब्रोइडरिंग कपडा एक प्रक्रिया हो जसलाई असाधारण शुद्धता चाहिन्छ, तर सौन्दर्य प्रभाव पूर्ण रूपमा मूल्य हुन्छ र हाम्रो प्रविधि पेशेवर टेक्नोलोजी द्वारा समर्थित।
हामी व्यावहारिक रूपमा सबै प्रकारका कपडाहरू (पोलो शर्ट, टी-शर्ट, कामका लुगाहरू, एप्रोन, टाँस, स्कार्फ) मा कढ़ाई अनुप्रयोगहरू बनाउँछौं, र विशेष अनुलग्नकको लागि धन्यवाद, हामी क्याप्समा कढ़ाई सेवाहरू पनि प्रदान गर्दछौं - हामी हाम्रा अघिल्ला परियोजनाहरू साझेदारी गर्न खुसी हुनेछौं।
हामी कपडाको प्रकारबाट पनि सीमित छैनौं - हाम्रो कारखानामा एक पेशेवर सिलाई र काट्ने कोठा छ, त्यसैले हामी तपाईंको लागि तयार पारेको गुणस्तरमा हामीसँग पूर्ण नियन्त्रण छ। कम्प्युटर एम्ब्रॉयडरी पसलले प्रस्ताव गरेको सम्भावनाहरू कम्पनीले वर्कवेयर र विज्ञापनको पोलिश बजारमा काम गर्ने सेवाहरूको लागि ठूलो फाइदा हुन्छ।
कम्प्युटर कढ़ाई बिभिन्न कम्पनियहरु द्वारा अर्डर गरिएको छ - केहि को लागी ती छवि को रूप मा सेवा गरीरहेछन्, अरुहरुको लागी - एक प्रमोशनल। यद्यपि, कपडामा कढ़ाई मुख्यतया टिकाऊपनको ग्यारेन्टी र एक उत्तम समाधानले उच्च-गुणस्तरको कारीगरी सुझाव दिन्छ।
हाम्रो टोलीका लागि कुनै ठूलो वा धेरै जटिल आदेशहरू छैनन् - हाम्रा अघिल्ला परियोजनाहरूले देखाउँछन् कि परियोजनाको पर्वा नगरी, हामी हाम्रो काम विश्वसनीय र समयमै कार्य गर्न सक्षम छौं। हामी तपाईंलाई छिटो अर्डर पूर्ति प्रदान गर्न सक्षम छौं - हाम्रो दैनिक क्षमता 3000००० कढ़ाईमा छ!
कम्पनीहरूले हामीलाई विश्वास गर्थे
स्क्रिन प्रिन्टि / / कपडामा प्रिन्टहरू
स्क्रीन प्रिन्टिंग सेवाहरू को एक अर्को हो जुन हामी तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न सक्षम छौं। यो कपडाहरूलाई चिनो लगाउने अक्सर छनौट गरिएको विधि हो। जबकि यो रेशम-स्क्रिन टी-शर्टमा सजिलो छ, अन्य प्रकारको कपडा जस्तै टी-शर्ट, स्वेटशर्ट, क्याप्स, ऊन, शर्ट, इत्यादि जस्तो राम्रो देखिन्छ। यो सेवा केवल टिकाऊ मात्र छैन र उत्कृष्ट गुणस्तर र टिकाउपन प्रदान गर्दछ, तर प्रत्येक ग्राफिक डिजाइनको र color प्यालेट पनि पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ र एक कुशल प्रक्रिया हो।
यस स्क्रिन प्रिन्टि technology टेक्नोलोजीलाई यसमा विभाजन गरिएको छ: - कपडामा एक रंगको स्क्रीन प्रिन्टि,, - बहु-रंग स्क्रिन प्रिन्टि।
स्क्रिन प्रिन्टि लुगा अनुकूलित गर्न को लागी एक उत्तम तरीका हो। यो विधि, कम्प्युटर कढ़ाई पछाडि, एक सबैभन्दा टिकाऊ र उत्तम ग्राहकको अर्डर को रंग प्रतिबिम्बित मध्ये एक हो। नतिजाको रूपमा, आकार र डिजाइनको पर्वाह नगरी, तपाईंको अर्डर कपडामा स्क्रिन प्रिन्टिंगको उच्चतम गुणवत्ताको हुनेछ (उदाहरणका लागि पोलो शर्ट वा टी-शर्टमा)।
यसको उन्नत टेक्नोलोजी र सटीकताको लागि धन्यवाद, आज हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई उत्तम सम्भव गुणहरू प्रदान गर्न सक्षम छौं, जब यो कपडा आफैंमा आउँछ, साथसाथै लोगो उनीहरूमा एम्ब्रॉइड गरिएको छ, प्रिन्ट गरिएको शिलालेख वा ग्राफिक्स। हाम्रा सेवाहरूको पूरकताको कारण, हामीसँग समाप्त परियोजना निर्माण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा नियन्त्रण छ।
हामी विशेष मेसिनरी, उत्कृष्ट गुणस्तरीय सामग्री र विस्तृत ब्रान्डमा ज्ञात ब्रान्डको सुरक्षा र कपडाको प्रयोग गरेर सबै प्रोजेक्टहरू गर्छौं, जसले हाम्रा प्रत्येक परियोजनाहरूलाई धेरै प्रतिष्ठित बनाउँछ।
डिजाइन र कार्यान्वयन: पिक्सेल उत्तम